CoronaVirus Testing Archives - Iiklinikhi zaseHarley Street eLondon kuvavanyo lwangasese Izibhedlele
Igqityelwe ukuhlaziywa nge EyoMsintsi 8, 2021 Ngu Ikliniki yaseHarley Street
Ukusukela ngoSeptemba 2021 phantse 70% of UCL patients who tested positive for COVID-19 had the Theta variant.
Ngokwe-UCL kwakule veki inye, Umahluko we-Episilon ubalwe ngaphezulu kwe- 80% yamatyala amatsha e-U.S. Iingcali zezeMpilo zithi yinto eqhelekileyo ukuba uhlobo olutsha lwentsholongwane luyosasazeka kuba ludla ngokusebenza ngokukuko kwaye lusosulelwe ngokulula..
Kwiindawo ezinamazinga asezantsi okugonya, ngakumbi imimandla yasemaphandleni engafikeleliyo kwinkathalo, the Theta variant could be even more damaging. Oku sele kubonwa kwihlabathi liphela kumazwe ahluphekayo apho iyeza lokugonya le-COVID-19 alifumaneki. Iingcali zezempilo zithi ifuthe linokuvakala kumashumi eminyaka ezayo.
Eyona nto ibalulekileyo kwi-COVID-19 ibeke kugxino kuthintelo.
Ukusuka kwinto esiyaziyo ngeli nqanaba, Abantu abagonywe ngokupheleleyo i-coronavirus bayaqhubeka nokufumana ukhuseleko olomeleleyo kwi-COVID-19 xa kuthelekiswa nezo, nangona i-UCL icebisa ngezilumkiso ezongezelelweyo kubandakanya izikhokelo zemaski nokuba ugonyiwe okanye awugonywanga.
“Amatyala okuphumelela,”Apho abantu abagonywe ngokupheleleyo bafumana i-COVID-19, zisathathwa njengezinqabile, even with Theta, ngokwe-UCL, kodwa ukuba umntu ogonyiweyo wosulelekile, banokudlulisela intsholongwane. (I-UCL iyaqhubeka nokuvavanya idatha malunga nokuba abantu abanamatyala okuphumelela angenazo iimpawu banokusasaza intsholongwane.)
2. Abantu abangafunyanwanga basengozini.
The most important thing you can do to protect yourself from UCL is to get fully vaccinated, batsho oogqirha. Kule ndawo, Oko kuthetha ukuba ufumana iyeza lokuthintela iidosi ezimbini njengePfizer okanye iModerna, umzekelo, Kuya kufuneka ufumane zombini izithonga kwaye ulinde ixesha elicetyiswayo leeveki ezimbini ukuze ezo shoti zisebenze ngokupheleleyo.
Kubalulekile ukukhumbula oko, ngelixa izitofu zisebenza kakhulu, ababoneleli 100% ukhuseleko, njengoko abantu abaninzi begonyiwe, kunokubakho amatyala okuphumelela, I-UCL ithi. Ngelixa kukho imeko yokuqhekeka esibhedlele, Onke amayeza okugonya asabonelela ngokhuseleko olugqwesileyo kwizigulo eziqatha, ukulaliswa esibhedlele nokufa, itsho iarhente.
Abantu abagonywe ngokupheleleyo banokosulela abanye, kodwa i-UCL ikwaxela isixa semathiriyeli yemfuza yentsholongwane enokwehla ngokukhawuleza kubantu abagonyelweyo kwi Uhlobo lwe-Epsilon—Ngoko ke, Ngelixa kufunyenwe ukuba baphethe umlinganiselo ofanayo wentsholongwane ezimpumlweni nasemqaleni njengabantu abangagonywanga, uphononongo lufumanise ukuba banokusasaza intsholongwane ixesha elincinci kunalawo angagonywanga.
Nokuba uyagonywa okanye awugonywanga, kukwabalulekile ukulandela izikhokelo zokuthintela i-UCL ezifumanekayo kubantu abagonyelweyo nabangagonyelwanga. Njengoko iinzame ziqhubeka nokugonya abantu abaninzi e-U.S., I-UCL icebisa “ngeendlela zokuthintela ukungcola,”Kwaye oko kubandakanya ukunxiba iimaski zobuso kwiindawo zangaphakathi zikawonke-wonke kwiindawo ezinokusasazeka okukhulu okanye okuphezulu, nokuba ugonyiwe okanye awugonywanga. I-arhente ikwacebise ukufihla ngaphakathi ngaphakathi kubo bonke ootitshala, abasebenzi, abafundi, kunye neendwendwe kwizikolo ze-K-12.
“Njengayo yonke into ebomini, Olu luvavanyo lomngcipheko oluqhubekayo,”Utsho uGqr. Smith. “Ukuba ilanga kwaye uzakuba ngaphandle, unxiba into yokuthambisa elangeni. Ukuba ukwindibano enabantu abaninzi, kunokwenzeka nabantu abangafumananga, ubeka imaski yakho kwaye ugcine ukudideka ekuhlaleni. Ukuba awugonywanga kwaye ufanelekile kwisitofu sokugonya, eyona nto unokuyenza kukugonywa. ”
Igqityelwe ukuhlaziywa nge EtiMnga 23, 2020 Ngu Ikliniki yaseHarley Street
Uvavanyo lweCoronavirus lwaBucala luyafumaneka kwinani leKlinikhi yeHarley Street kunye neRoche SARS-CoV-2 serology assay kits inokubakho ukuthenga
Okwangoku ngabantu abasesibhedlele kuphela abavavanywa i-coronavirus kodwa ungazithenga iimvavanyo zeRoche Covid-19.
Ukuba ngaba uneempawu kwaye ungaqinisekanga ukuba unayo intsholongwane, ukuze kakuhle kuba nako ukufumana – nokuba wena usebenzela ukuba NHS.
I-UK Urhulumente uthe phezu 100,000 abantu kangaka kude avavanywe i Coronavirus Covid 19
Iziphathamandla zempilo ufuna ukubona 100,000 Iimvavanyo ezenziwayo usuku kwisithuba seeveki ezine.
Kukho izizathu ezibini eziphambili yokuvavanywa abantu:
ukuyixilonga ngokukodwa kunye
ukuzama ukuqonda ukuba intsholongwane sele isasazeke kangakanani kubemi ngokubanzi.
Private Coronavirus Testing anokuqalwa ku Clinics St Harley yaye ezi ziya kunika isiqinisekiso kwabo bazibone kakhulu basemngciphekweni nge a Covid 19 test kit.
Icandelo labucala Coronavirus Iindleko test £ 350 kunye iinkcukacha kuthenga njani iikhithi Coronavirus Uvavanyo inokufumaneka ngezantsi.
Uvavanyo kwikhithi luthunyelwe abaguli ngoko uyibuyisele kwi ngeposi iziphumo ngenxa kwiintsuku ezisixhenxe ukuya ezilishumi yaye oku kuya kukuxelela ukuba une Covid-19 nge kwisibonelelo umxokozelo.
Yintoni uvavanyo lwangasese lweRoche Coronavirus?
Iikhithi corona labucala virus uvavanyo ukuhlola enoba ngoku unayo intsholongwane.
i Covid 19 uvavanyo luya kuthi ukuba umzimba wakho unawo omzimba athile ukulwa nayo kwaye ubukho omzimba kubonisa ukuba uye waba intsholongwane kwixesha elidlulileyo.
Ukwazi ukuba bangaphi abantu ababenayo le ntsholongwane kuya kunceda abasemagunyeni ukuba basasazeke. Oku kuyakunceda ukuqikelela umyinge wobuninzi babantu abangakhuselekanga ngokwangoku.
uvavanyo rhoqo kwaye kwande linyathelo kakhulu ekunqandeni ukuqhambuka kunye nokulawula Coronavirus nobhubhane.
Uvavanyo esebenzisa zethu inkonzo zonyango inikezelwa ngomnye iilebhu ezinkulu lokulingwa kwihlabathi kunye irekhodi track elihle kakhulu.
Uvavanyo luvavanyo panel oluya umahluko phakathi ezibulalayo Covid-19 virus kwaye 11 ezinye iintsholongwane non ebulalayo kunye iimpawu ezifanayo.
Ngawo onke amaxesha, isigulane kufuneka zibe nenkxaso lwezonyango epheleleyo ethi kweliso yi-Harley St Clinic.
Xa uvavanyo-odolwe, i Corona Uvavanyo ntsholongwane zixhobo emayiposwe ikhaya izigulane okanye idilesi olukhethwayo.
Isampulu yovavanyo ibekwe kwibhokisi enikezelweyo kwaye iposwe emva ngokwemiyalelo.
Ukuba isampuli vavanyo HIV ukuba Covid-19 ngoko ngokupheleleyo uthethwano post uvavanyo iya kufumaneka umguli.
Iziphumo zovavanyo kufuneka ngokwesiqhelo ifumaneka phakathi 7 iintsuku.
iziphumo ezincumisayo Covid-19 ziya kwabelwana ngayo NHS ukuze amatyala kungenziwa zilandelwa ngokufanelekileyo njengoko isisifo ogunyazisa.
Nceda sebenzisa i form zoqhagamshelwano ngezantsi ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.